Kulankii Man City Iyo Real Madrid Ee Wareegga 16ka Champions League Oo War Cusub Kasoo Baxay – Miyaa Gebi Ahaanba La Joojinayaa Ciyaartan?
Wednesday July 29, 2020 - 22:10:38 in Maqaallo by Editor Caynaba News
Kulanka Manchester City iyo Real Madrid ee lugta labaad ee wareegga 16ka tartanka Champions League ayaa shaki
weyn galay inuu qabsoomi doono, kaddib markii fayraska Korona laga helay weeraryahanka Los Blancos ee Mariano Diaz, xilli ay kooxdiisu isku diyaarinaysay kulanka tegayaan Etihad Stadium.
26 jirkan ayaa la geliyey karantiil laba toddobaad ah, waxaanay taasi kordhisay walaaca dawladda UK ay ka qabto dadka ka imanaya Spain oo ay u dejisay sharci karantiil oo 14 maalmood uu gelayo qof kasta oo ka yimaadda waddankaas.
Laakiin war wanaagsan ayaa usoo yeedhay taageereyaasha labada kooxood, waxaana hadda loo xaqiijiyey in ciyaarta Manchester City iyo Real Madrid ay qabsoomi doonto xilligii loo qorsheeyey.
26 jirkan reer Spain ayaa la xaqiijiyey in aanu haba yaraatee ciyaartoyda kooxda soo dhex gelin toddobaadkii ugu dambeeyey oo uu ka maqnaa, sidaas darteedna ay baadhitaannadii lagu sameeyey xiddigaha kooxdu ay soo baxday nadiif iyo in ay ka badqabaan caabuqan.
Zinedine Zidane ayaa ciyaartan u baahnaa inuu dagaal adag u galo sidii uu kooxdiisa ugu diyaarin lahaa, sababtoo ah waxa lugtii hore lagu garaacay 2-1 iyagoo jooga Santiago Bernabeu.
UEFA ayaa in muddo ah ka walaacsanayd haddii sharciga xakamaynta caabuqa Korona uu saamayn doono kulankan, laakiin Safiirka UK ee Spain ayaa shaaciyey in sharcigaasi aanu qaban doonin ciyaartoyda Real Madrid ee garoonka Etihad ugu tegaya Man City.